Ukulibaziseka kwe-imeyile kwi-Outlook > UVielhuber uDavid
Ukulibaziseka kwe-imeyile kwi-Outlook05
Unxibelelwano lwe-imeyile olunxibeleleneyo-ngaphandle kwazo zonke iziprofeto zentshabalalo ezijikeleze iSlack kunye neDiscord- eyona nto iphambili kunxibelelwano kwicandelo leshishini kwihlabathi liphela. Ukongeza kwi- Inbox Zero evela eMerlin Mann, zininzi ezinye iindlela zokujongana nezikhukhula zemihla ngemihla ze-imeyile, kubandakanya oko kubizwa ngokuba kukulibaziseka kwe-imeyile, okt ukuhanjiswa okucothayo kwe-imeyile.
Ukuba ufuna ukuzikhulula ixeshana kubomi bemihla ngemihla, ukulibaziseka okuzenzekelayo kwee-imeyile kuyacetyiswa. Utyhala ngokuzenzekelayo iimpendulo kwikamva kwaye kwangaxeshanye ungasinciphisa isantya sokuphendula kwakho. Umsebenzi uqinisekisa ukuba i-imeyile ethunyelwe ngengozi kubathengi okanye kumphathi usenokuphinda afumaneke kangangexesha elithile.
Kule projekthi, ndiza kubonisa iindlela ezintathu ezahlukeneyo zokuba ungayenza njani le nto uyifunayo. Umahluko wokuqala, senza umthetho we-Outlook (kwimeko yecala lotshintshiselwano) (kuzo zonke iiakhawunti ze-imeyile ezisetyenzisiweyo):
Le nkqubo ilibazisa yonke imiyalezo ephumayo. Ngelishwa, lixabiso kuphela lemizuzu eli-1-120 elinokubakho ngeli xesha, ukuze ii-imeyile zingalibaziseki ngaphezulu kweeyure ezi-2.
Ukuba ufuna ukwandisa ixesha kunye nokulawula ngakumbi, ungasebenzisa ukwanda kwe-Outlook ngeskripthi se-VBA ngasinye. Ukwenza oku, vula umhleli we-macro (ALT + F11), yiya kwimodyuli ye- "ThisOutlookSession" kwaye ufake esinye sezikripthi ezilandelayo (utshintsho luyasebenza ngaphandle kogcino olucacileyo kwaye ngaphandle kokuqalisa kwakhona i-Outlook):
Kulo mzekelo, zonke ii-imeyile zithunyelwa ngokuzenzekelayo ngo-6: 00 emva kwemini.:
Umzekelo, ukuba ufuna ukulibazisa ixesha lokuthumela le-imeyile nganye ngeeyure eziyi-8, le script ilandelayo iyayenza:
Kwaye ukuba ufuna ukuthumela yonke imeyile ngexesha lamaKristu kusasa ngosuku olulandelayo lokusebenza, ungasebenzisa oku kulandelayo:
Ukuba ufuna ukubuzwa malunga nokulibaziseka ngaphambi kokuthumela, ungabonisa incoko yababini ngaphambi kokuthumela, apho uya kucelwa ukuba uyafuna ukulibazisa okanye hayi. Kwakhona kunceda: ukucofa "Rhoxisa" kumisa ukuthunyelwa kwe-imeyile ngomzuzu wokugqibela.
Ii-imeyile esele zilityazisiwe ngokuzenzekelayo ziphelela kwibhokisi yangaphandle yeakhawunti ye-imeyile leyo bathunyelwa kuyo bade bathunyelwa. Kubalulekile: Zithunyelwa kuphela xa i-Outlook ivulekile. Ukuba ufuna ukufumana oku phaya kwiimeko ezizodwa, ususa i-imeyile uyile kwiidrafti, wenze kungasebenzi uphawu lokutshekisha "lokulibazisa ukuhambisa kude kube" kwiipropathi ze-imeyile ngokukhetha> Ukulibaziseka ukuhambisa kwaye uphinde uthumele kwakhona.
Ukuze zonke ezi ncwadi ze-VBA zikhankanywe apha ngasentla zisebenze, ikhowudi kwi "ThisOutlookSession" yenziwa kwimodyuli yeVBA eyahlukileyo, esayiniweyo ngokwamanani . Ukuvavanya imisebenzi okwangoku, unga (ngokukhethekileyo kuphela ixesha elifutshane) vumela zonke ii-macros phantsi kwe Useto> Iziko leTrust> Useto lweZiko leTrust ...> Useto lweMacro:
Ukuba ufuna ukudibanisa izibonelelo zokwahluka kokuqala (ukuthunyelwa kwicala leseva) kunye nokwahluka kwesibini (ukukhetha ixesha eliguqukayo), iBoomerang ye-Outlook nomsebenzi we "Thumela kamva" uyacetyiswa. Le nkonzo inikezela ngokulibaziseka kwee-imeyile ezili-10 ngenyanga kwaye isebenza ngokuthembekileyo.